Sanadguurada 74-aad ee maalinta ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo la xusayo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSanadguurada 74-aad ee maalinta ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo la xusayo
December 20, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Sawirka: Ciidamo booliis ah oo ka qeybgalaya xuska sanadguuradii 72-aad gudaha Muqdisho 20 December 2015.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Sanadguurada 74-aad ee maalinta ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa laga xusayaa gudaha Soomaaliya.
Dhammaan gobolada dalka oo dhan ayaa maanta oo Arbaco ah waxaa lagu qabtay munaasabadaha xuska maalinta ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ku beegan 20 December.
Ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ah haayada ugu sareysa ee haayadaha sharci fulinta ayaa la asaasay 20 December 1943 todobo sanno kahor xornimada, balse markii ay dhacday xukuumaddii Maxamed Siyaad Bare sanadkii 1991, Soomaaliya ayaan weli lahayn ciidamo booliis oo si wanaagsan u tababaran oo abaabulan.
February 24, 2018 Turkiga oo cambaareeyay qaraxyadii ka dhacay Muqdisho
December 15, 2019 Guddiga Kumeelgaarka ah ee Doorashooyinka Puntland oo soo bandhigay qorshe howleedkooda
Garowe-(Puntland Mirror) At least seven ISIS fighters were killed in heavy fighting between Puntland government forces and ISIS militants in Bashaashin area of Bari region, governor said. Speaking to VOA Somali, Bari governor Yousuf Mohamed [...]